Best Buy သည် Barnes & Noble ကဲ့သို့မဟာဗျူဟာအတိုင်းလိုက်နာနိုင်သည် eReaders အားလုံး
ယခုအပတ် Nook Tablet7ကိုရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပြီးအလွန်လိုချင်တပ်မက်မှုရှိပြီးလူတိုင်းကလက်ကိုဆွဲဖို့စောင့်နေကြတယ်။ လူအများကဒါကိုပြောကြတယ် Barnes & Noble ၏နိူးထမှု၏အစဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှန်တရားဖြစ်သော်လည်း ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်များစွာသောအားဖြင့် Amazon ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်ကယ်တင်နိုင်သောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိရိယာများရှိခြင်းသည်ထိုအရာဖြစ်သည် Best Buy ကဲ့သို့သောအခြားကျော်ကြားသောစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကိုသင်ခေါ်ဆိုသည်.
Best Buy နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများကအောင်မြင်လျှင်၎င်း Barnes & Noble မော်ဒယ်ကိုကူးယူနိုင်သည်။
နာမည်ကျော်စတိုးဆိုင်များသည်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက်ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအပြင်အခြားထုတ်ကုန်များကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးတော့မည်ဖြစ်သည်။ လိုပဲလာပါ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဆက်ကပ်ဘယ်မှာလက်ရှိစူပါမားကက် အခြားတူညီပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့ထုတ်ကုန်များအပြင်။
ထို့ကြောင့် Best Buy သည်လည်းစတင်နိုင်သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တက်ဘလက်Amazon Fire (သို့) Nook Tablet7ကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများနှင့်များစွာကွာခြားမှုမရှိသော်လည်း Best Buy တံဆိပ်နှင့်အခြားဖြည့်စွက်မှုများလည်းရှိသည်။
အလားတူအရာတစ်ခုခုလည်းရှိပါတယ် သင်၏ eReader ဖြင့် Carrefour, အခြားစက်များနှင့်အတူကုန်သွယ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းချိုသာသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့ကကမ်းလှမ်းပုံကိုထိုကဲ့သို့သော, အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ် eReader ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံရေလွှမ်းမိုးသွားပုံရသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သို့) နာမည်ကိုသာပြောင်းလဲသည့်တူညီသောစက်ကိရိယာများနှင့်အတူစျေးကွက်။ သူ့လက်ထက်၌မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာများ (သို့) တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၅၀ ထက်နိမ့်သောတက်ဘလက်တစ်ခုသို့မဟုတ်စာဖတ်သူတစ် ဦး ရှိရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းလုံးဝသေချာမသိပါ။ ဒါပေမယ့် သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? နာမည်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကိရိယာတွေကငါတို့ကိုရေလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Best Buy သည် Barnes & Noble ကဲ့သို့မဟာဗျူဟာအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်
Barnes & Noble သည် Demo Parneos ကို COO အသစ်အဖြစ်ငှားရမ်းသည်